'Mariin hidha haaromsaa Washingitanitti taa'ama ture waliigaltee malee xumurame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Ministira Bishaan, Jallisii fi Inarjii Dr Injinar Silashii Baqqalaa marii Kaartuum irratti
Mariin dhimma Hidha Haaromsaa irratti ministiroonni bishaaniifi ogeeyyiin Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan Washiingitanitti taasisaa turan ammas waliigaltee malee xumurameera.
Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbo Fitsum Araggaa akka jedhanitti ministiroonnii fi ogeeyyiin biyyoota sadan Guraandhala 12 fi 13 sanada waliigaltee qopheessuuf mari'achaa turani.
Haa ta'u malee marsaa kanaanis sanada waliigaltee qophaa'u irratti osoo walii hin galiin marichi xumurameera.
Biyyoonni sadan qabxiilee akkamiirratti akka waliigaluu dhaban garuu ambaasaaddar Fitsum waan jedhan hin qaban.
Koreen teknikaa fi ogeeyyii seeraa of keessaa qabu sanada biyyoota sadeen waliigaluu dandeesisu qopheessaa turuu dubbi himaan Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa har'a kennaniin dubbataniiru.
Doonaaldi Tiraampi waa'ee laga Abayyaa irratti MM Abiy Ahimediif bilbilaniiru
Itoophiyaan haala kamiinuu faayidaa biyyaalessaashee dabarsitee akka hin kennine fi mallattoo faayidaa biyyaalessaashee hin eegsisne akka hin mallatteesine yaadachiisuun, hanga dhumaattis adeemsa faayidaa biyyaalessaa keenya eegsisu hordofna jedhan.
"Sanadichi bifa mallattoof tahuun hin qophoofne. Hanga faayidaan biyyaalessaa Itoophiyaa waligalticha keessa hin galletti hin mallatteessitu" jedhan.
Ogeessi marii kanarratti hirmaachaa jiraniifi dhimmicha keessa beekan maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan mariin hidha haaromsa Itoophiyaa irratti taasifamaa ture kallatti gadhiisee gara gahee bishaanii qoqqooddachutti ce'uusaa BBC'tti himanii turan.
Sudaan ejjannooshi jijjiruun Masrii cinaa goruu akkasumas, Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa Masriidhaaf looguun amma dhimmichi '4 fi 1' ta'eera jechuudhaan Itoophiyaarratti dhiibbaan uumame jiraachuu himu namni maqaan isaanii akka hin dhaahamne fedhan kun.
Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa dhimma hidhichaa keessa harka akka seensifatan eeyyamuun Itoophiyaa gatii kafalchiisaa jiraa jedhu namni keessa beekaan kun.
Ameerikaatti Ambaasaddarri Itoophiyaa obbo Fitsum Araggaa guyyota lama dura gartuun mari'atu 'dhimmoota hedduurratti mariyatus, sanada waliigaltee qopheessuu dadhabuun mul'ateera' jedhaniiru.
Akka nama dhimmicha keessa beeku BBC'f yaada kenneetti, waliigaluun kan dadhabameef, sanadni waliigaltee harki caalu Ameerikaan dhiyaatee, xiyyeeffannoon isaas akkaata hidhi kun guutamuufi bishaan gadhiifamu otoo hin taane, 'eenyu bishaan hammam qooddachuu qabaa' kan jedhurratti waam fuulleffateefi.
Ogeessi maqaan isaanii akka hin eeramne marii kanarratti hirmaataa jiran kun, jiilli seera baastota Itoophiyaa ammas Ameerikaa akka jiran yaadachiisuun, qooddannaa bishaaniirratti mari'achuuf akka biyyaatti qophii akka hin taanefi, kaayyoon waliigaltee kanaas dhimma kana akka hin taane himaniiru.
Akka ogeessi kun jedhaniitti, kanatti dabalataan hidhichatti bishaan guutuu fi gadhiisuu ilaalchisee hiikaa jechoota sanadicharratti barreeffaman kan akka gogiinsa, gogiinsa yeroo dheeraafi gogiinsa itti fufiinsa qabuu jedhanirrattis waliigaluun hin danda'amnee jedhan.
Sababii kanaaf seera baastonni Itoophiyaa dhimma kanaa fi kan biroof qabxiilee sanadicharratti tarreeffaman hedduu ija shakkiin ilaaluuf dirqamaniiru jedhu.
Qabxiin wal-dhabdee inni ijoon sanadni kun qooda/gahee bishaaniirratti xiyyeeffachuu hin qabu kan jedhu ta'uu dubbatu.
"Ogeeyyin seeraa Ameerikaa dhaqaniis qooddannaa bishaaniirratti akka dubbataniif aangoon hin kennamneef, qoodannaa bishaaniirratti Itoophiyaa fi Masrii qofa otoo hin taane biyyoota yaa'a Naayil/Abbayyaa kurnanitu irratti mariyachuu qabaata" jedhu.
Itoophiyaan biyya waltumsa biyyoota yaa'a Naayil/Abbayyaa mallatteessuun raggaasifte ta'uushiitiin, waliigalteen kuni otoo hin diigamiin mari'achuu akka qabdu hubachiisan.
Ameerikaafi Baankii Addunyaa...
Marii biyyoota sadan gidduutti mari'atamu keessa qaamni sadaffaan seenuu akka qabu yaada kan dhiyeessite Masrii turte.
Pirezedaantiin biyyatti Abdulfattaa al- Siisii, Ameerikaan jaarsummaaf gidduu keenya haa seentuu jechuudhaan yaada dhiyeessuun isaanii ni yaadatama.
Wayita sanattis, Itoophiyaan giddu seentummaa qaama sadaffaa akka hin fudhanne ibsitee turte.
Booda garuu, Baankiin Addunyaa fi Ameerikaan marii biyyoota sadan giddutti gahee taajjabdummaa qabaachuun irratti hirmaatu jedhame.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad gaaffii mana maree bakka bu'oota uummataarraa dhiyaateef deebii wayita kennan, Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa waliigalchiisuuf gaafatanii waliigalchiisaa akka turan' dubbatan.
''Ameerikaa fi Baankii Addunyaa galateeffachuun kan barbaachisu, warra nu beekanii fi humna warra qaban fulduratti dubbannee walii galuu eegalleerra" jedhaani dubbatan.
Namni maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan kun BBC'tti akka himanitti, Magaalaa Finfinneetti wayita yeroo jalqabaaf mari'atan taajjabdoota ta'anii hirmaatan, Kaayiroottis taajjabdoota ta'anii itti fufan, Sudaan Kaartumitti garuu waliigalchiisuuf dhiyaatan, gaafa Finfinneetti deebi'an jaarsummaan gidduu seenu itti fufani jedhu.
'Amma Waashingitanitti gartuu seeraafi teekinikaa dhiyeessanii, sanadni dhiyaate ifatti mariyatamaa jira' jechuun ibsu.
Goodayyaa suuraa A.L.I Mudde 11 marii Sudaan kaartuumitti biyyoota sadan jidduutti taa'ame
Qaamoleen kunneen taajjabdummaarraa gara qaama waliigalchiisuutti ce'uusaniitiin olitti, Itoophiyaarratti dhiibbaa uumuurra darbee amma sodaachisuutti gahaniiru' jedhu ogeessi kun.
Akka isaan jedhanitti, Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa yaada qaama walii galuuf mari'ataanirraa ka'u fudhachuuf fedha hin qaban jedhu. Caalatti yaada Masrii fi Sudaan qofa fudhatu.
Dhimma hidha kanaarratti jalqabaarra kaastee bu'aa ofiif jecha Itoophiyaa cinaa kan dhaabatte Sudaan ejjannoo ishii jijjiiruun Masrii wajjin hiriiruu mirkaneessu.
Akka namni kun ibsanitti yoo ta'e, Ameerikaan qoqqobbii Sudaanirra keesse akka kaafamuuf barbaadduus, Ameerikaan qoqqobbii kaasuuf haal-duree hedduu tarreessite jedhu.
Pirezidanti duranii Sudaan al-Bashiir Mana murtii yakkaa idila addunyaa ICC'f dabarsitee kennuun, tarii haal-duree biyyattin guutte ta'uu danda'aa jechuun shakkii qaban himu.
Masrii cinaa hiriiruun ulaagaa lammaaffaa yoo ta'u, isa kanas Sudaan raawwachaa jirtii jedhu.
'Qaama sadaffaa gidduu seensisuun gatiin jabaan kafalamu tokko kanumaa' jechuudhaan Itoophiyaaf karaa sirrii akka hintaane ibsu.
Ameerikaan maaliif Masriif loogdi?
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonald Tiraamp dhiyeenya kana karoora nageenya Baha Giddugaleessaa 'nagaan badhaadhinaaf' (Peace to Prosperity) jedhu ifoomsuun isaani ni yaadatama.
Karoora kun magaalaan Jaruusaleem osoo hin qoodamiin magaalaa guddoo Israa'el akka taatu lafa kaa'e. Kana malees Paalastaayiniifi hawaasni idil-addunyaa seera qabeessa miti kan ittiin jedhu qubannaa Israa'el Westi Baanki keessatti ijaartuuf beekmtii kenna.
Karoorichi Paalastaayin dabalatee biyyoota akka Iraaq fi Siiriyaa irraa ifatti mormiin isa mudateera.
Karoora kana biyyootni Arabaa kaanis mormaniiru. Masriin biyyoota naannicha biratti dhageettii waan qabduuf karoorri Tiraamp akka milka'uuf qooda gamashii gumaachuu dandeessi jedhu namni kun.
Sudaan fi Isra'eel
Biyyoota liigii Arabaa Israa'eeliif beekmatii hin kennine keessaa tokko Sudaanidha. Biyyootni lamaan hariiroo siyaas-diinagdeen waliin qabanis jira kan jedhamu miti.
Torbee tokko dura garuu haala seena qabeessa ta'een MM Israa'el Benjaamiin Netanyaahu fi walitti qabaan Mana maree Ce'umsaa Mootummaa Waraanaa Sudaan kan ta'an Abdulfattaa al-Buhraan Yugandaatti wal arganii mari'ataniiru.
Hogganoonni lamaan erga mari'atanii booda hariiroo biyyoota lamaanii eegalsiisuuf waliigalaniiru.
Maricha booda MM Netanyaahuun Sudaan karaa sirriirra jirti jechuun dubbataniiru.
Biyyoota lamaan gidduutti hariiroon eegalamuun Israa'el biyyoota Liigii Arabaa biratti fudhatamummaa akka argattu fedhii Donaald Tiraamp gutuuf ni gargaara.
Iccitiin Sudaan ejjennoo jijjiirrattee Masrii cinaa dhaabbachuus kanuma ta'uu danda'a jedhu ogeessi yaada isaanii BBC'f kennan kun.
Marii kana keessatti wanti Itoophiyaan tole jechuu hin qabne maali jennee ogeessa kana gaafannee turre.
"Haalli itti adeemamaa jiru balaa guddaa qaba" jedhu. Itoophiyaan durumaanuu Masrii fi Sudaan qofa waliin waa'ee qooda bishaanii irratti mari'achuu kan diddeef dhiibbaa narraan gahu jetteeti jedhu.
"Amma garuu hammaatee afuuri fi tokko jidduutti falmii taasifamu ta'eera" jechuun Masrii, Sudaan, Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa waliin dhaabbachuu himu.
Dhiibbaa amma jiru keessatti Itoophiyaan waliigaltee kana mallatteessitullee dhaloota dhufu biratti fudhatama waan hin qabneef turus biyyoota sadan gidduutti rakkoo uumuun isaa hin oolu jedhu.
Itoophiyaa marii ammaa kana adda kutuu qabdi jedhu ogeessi kun. Boodatti deebi'anii mari'atanii hundayyuu fayyadamtoota waan taasisurratti hojjechuu wayya jedhan.
Marichi yoo kan itti fufu ta'e bu'uura waliigaltee 'Declaration of Principles' bara 2015 mallattaa'een ta'uu qaba jedhu.
Hogganoonni Itoophiyaa maal jedhu?
MM Abiy Ahimad torbe darbe mana maaree bakka bu'oota uummataatti ibsa miseensota mana marichaaf kennanin, biyyoonni sadan waliigaltee isa dhuma mallatteessuuf qophaa'anii osoo jiranii, osoo hin mallattaa'iin akka sakatta'amu kallattii kennannii tursiisuu isaanii dubbataniiru.
Sababa kanaanis pireezidant Donaald Tiraamp fi aanga'ota Baankii Addunyaa waliin bilbilaan mari'achuu himaniiru.
MM Abiy akkuma hogganoota Itoophiyaa duraanii bu'aan waliigaltee kanaa Itoophiyaa kan midhu akka hin taane nan hojjedha jedhan.
Ministirri Bishaan, Jallisii fi Inarjii Dr Injinar Silashii Baqqalaas guyyoota lama dura 'haala fedhii biyyaalessaa Itoophiyaa hin miineen jabaannee ni hojjenna' jedhanii turan.
Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbo Fitsum Araggaas "waliigalateen mirga laga Abbayyaatti fayyadamuu Itoophiyaa dhiibu kamuu hin mallatteeffamu" jedhaniiru.
Marsariitii Masrii 'Ahram Online' jedhamu waliigaltee MM Abiy Ahimad akka hin mallatteeffamne tursiisan Masriin mallatteessuu ishee gabaasee ture.
Qondaalonni Itoophiyaa waliigalticha mallatteessuun dura biyyatti deebi'anii mari'achuu filataniiru jechun, Sudaanis waliigalticha akka hin mallatteessine eeree jira.
Haa ta'u malee Sudaan fi Masrii jidduu wal-dhibdeen yaadaa guddaan hin jiru jedhe.